Galaxy Fold enwebeghị ụbọchị mwepụta nke gọọmentị | Androidsis
The Galaxy Fold enweghị ụbọchị ọ bụla dịka Samsung si kwuo
N'ihe dị ka izu abụọ gara aga, ekwenyesiri na mwepụta nke Galaxy Fold bụ yigharịrị mgbe ebighị ebi. Samsung kwuputara ya, ka emechara ya nsogbu ndị achọpụtara na ihuenyo ekwentị. Nke a na -egbu oge na mwepụta nke ekwentị egosiri dị ka ohere maka ụlọ ọrụ, ka ha nwee ike gbanwee ụfọdụ ihe na ekwentị. Mana ọ dị ka ha ga -ewe obere oge.
Na mbu ekwuru na Galaxy Fold a ga -egbu oge izu ole na ole. Mana Samsung ekwenyela na nke ahụ ekwentị enweghị ụbọchị mwepụta, maka ugbu a. Yabụ ọ nwere ike were ogologo oge karịa ka a tụrụ anya iru ụlọ ahịa. Ihe na -ebute nchegbu.
Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ anọwokwa na akụkọ na -adịghị mma. Ebe ọ bụ na webụsaịtị iFixit ama ama ebugo vidiyo nke akọwawara ya ihe nwere ike bụrụ ihe kpatara ya nke nsogbu ihuenyo Galaxy Fold. Nyocha nke ika Korea manyere web ahụ ịdọrọ ka e mesịrị, mkpebi nke butere arụmụka.
Samsung na -arụ ọrụ ugbu a na ihe ngwọta maka nsogbu ndị a na ngwaọrụ ahụ. N'otu oge ahụ, enwere ndị ọrụ na -enwebeghị obi ụtọ na ha chọrọ ịkagbu ndoputa ha. Ngwa ahụ nọ na -aga nke ọma na ndoputa, tupu nsogbu ndị a. Mana ụlọ ọrụ ahụ na -akwado na ndị na -achọghị idobe ndoputa a ga -enwetaghachi ego ha.
Ndị kwupụtara ọchịchọ ha nke ọma idowe ndoputa ahụ ga -ejigide ya. Mana ha ga -eche ogologo oge ruo mgbe ewepụtara Galaxy Fold a n'ihu ọha. Gụnyere na enweghị ụbọchị mwepụta dị, maka ugbu a. Anyị amaghị ogologo oge ọ ga -ewe ka ụlọ ọrụ ahụ dozie ọdịda ahụ.
Ya mere anyi aghaghi ime chere ka ịhụ ihe na -eme na mwepụta a. Nchegbu na -ebili na Samsung, ọ dabara nke ọma, ebe ọ na -eyi ọnọdụ ya egwu dị ka akara ohuru, atọrọ ka ọ jiri Galaxy Fold were akụkụ a nke ekwentị apịaji. Anyị ga -eso akụkọ a nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » The Galaxy Fold enweghị ụbọchị ọ bụla dịka Samsung si kwuo
Bọọlụ Agba Agba bụ "Pang" nwere ọtụtụ agba na nọmba